Diji – iAfrika
Njengabantu abakholelwa kakhulu esintwini, lokhu kufaka namadlozi, izangoma kanye nezinyanga. UZulu mkhulu kangaka nje nobukhosi bakhe izona izangoma nezinyanga ezisingethe wona lombuso, ngoba ngisho nasemandulo amakhosi ayephahlwa izona izinyanga. Ebukhosini bonke bukaZulu, ayikho inkosi eyayingasekelwe izanusi nezinyanga, ngoba ngisho amabutho ayo inkosi leyo belu ayeqiniswa izinyanga uma ezophikelela empini. Lokhu kusho khona ukuthi inkulu indima … Read more
Nina bakwaMthentuhlab’ usamila BakwaJuqu lodlamahleza BakwaNyoni kaMamasiyephi Ibuye noNgce eSibgubudu Yathi Mamase phumungicombele ZinamanyayezakoSozayi Zibuye nembewisaphethwe Nina bakwaMthonguthongwana UmuthodlamaNyanyambeya Nina bakwaSigagu Nina bakwaZikhethankomo Nina bakwaMhlambushiyanukwayusa Nina bakwaNdamase wasekuYeyeni Nina bakwaLanga liphume ladela Lakhumbuyamanyamayanga Laze lakhumbula koMafuya Nina bakwaMlotshwa Nina bakwaSambane.
Tags Clan names, Phakathi
Uma uphupha ubona utshani kusho ukuthi uyothola injabulo kanye nempumelelo ekusaseni lakho ikakhulukazi uma buluhlaza. Uma utshani bufile noma uyabunquma kodwa kusho ukuthi uyoba neshwa kanye nosizi.
Uma uphupha ukuthi uphuza ubisi kusho ukuthi uzoba nenhlanhla.
Uma uphupha ukuthi umuntu unesibhamu ngemvamisa kusho ukuthi kunenkathazo ezayo. Uma usizwa sidubula kusho ukuthi kuzoba nokulwa empilweni yakho maduzane. Uma kunguwena odubulayo ngesibhamu kubi kakhulu. Amaphupho ngamasosha.
Uma uphupha ukuthi ubona inhlamvu yesibhamu kuyibhadi uma uyibona kuphela kodwa yinhlanhla nempumelelo othandweni uma udutshulwa ngayo. Ukuphupha umuntu ozwana naye egwazwa – lokho kusho ukuthi uzingelwa isitha esisadla amathambo enqondo ukuthi sizokuthola kanjani.
Uma uphupha ukuthi usesikoleni noma kuzobe kubukwa wena emhlanganweni olandelayo oya kuwo. Njengoba amaphupho enezincazelo ezahlukene, ukuphupha ngesikole kubuye kusho ukuthi kumele uthwase. Amaphupho ngezivivinyo. Amaphupho ngemfundo.
Uma uphupha ukuthi uphuza utshwala noma iwayini ukugubha umkhosi kusho ukuthi uzoba nempilo nenjabulo ikakhulukazi uma unaye umuntu othandana naye. Kepha uma uphuza kakhulu kusho ukuthi kungenzeka ulahlekelwe umsebenzi wakho maduzane.